यो जोडघटाउमा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको विश्वासको मत प्रस्ताव के होला ?
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » यो जोडघटाउमा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको विश्वासको मत प्रस्ताव के होला ?
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आज बस्ने प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिैदै हुनुहुन्छ ।
साढे १२ बजे बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्रीले पेस गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलपछि आजै मत विभाजन गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले गठबन्धन एक ढिक्का भए विश्वासको मत पाउनुहुन्न । तर फ्लोरक्रस हुने सम्भावना धेरै छ । अघिल्लो पटक फ्लोरक्रसको सूचना आएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
९२ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा विश्वासको मत पाउनका लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रतिपक्षी गठबन्धनमा ५० जना सांसद छन् । सत्तापक्षमा सभामुखसहित ४१ जना छन् ।
गत भदौं १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका आचार्यले कात्तिक ७ गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको थियो । तर काङ्ग्रेसभित्रको किचलोका कारण बैठक आजसम्मका लागि सरेको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही सांसदले अहिलेपनि फ्लोरक्रस गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले बताउनुभएको छ । तर यो ह्वीप सबैले नमान्ने देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेको दावी गर्दै गठबन्धनले राईलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने आइतबार नै निर्णय गरिसकेको छ ।
आचार्यले विश्वासको मत नपाए वा राजीनामा दिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नेछन् । आहृवानपछि गठबन्धनले राईको नाम अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्न आजै ५० जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्ने गठबन्धनको तयारी छ । नेकपा एसका नेता राईले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकारमा दाबी गर्न गठबन्धनका सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिने बताउनुभयो ।
गठबन्धनले आचार्यको विपक्षमा मतदान गर्ने र मुख्यमन्त्रीको रुपमा राईलाई अघि सार्ने निर्णय गरे पनि सरकारमा सहभागिता र मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा छलफल गरेको छैन । नयाँ सरकार गठनको प्रकृया सुरु भएपछि मन्त्रालय बाडफाडका विषयमा छलफल हुने नेकपा (माओवादी केन्द्र( प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताउनुभयो ।
यता फ्लोरक्रस गराउन सकेसम्म प्रयास गर्ने र विश्वासको मत नपाउने निश्चित देखिएमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिनुहुनेछ ।
नेकपा एमालेका एक सांसदका अनुसार बैठकअघि वा बैठकबाटै राजीनामा दिने सम्भावना छ । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि अन्तिम समयमा राजीनामा दिएपछि मत विभाजन भएको थिएन ।
प्रदेश १ मा पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेकाले राजीनामा आउने सम्भावना रहेको ती नेताको भनाइ छ । यता मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव अनिल राजधामीले राजीनामा दिने विषयमा जानकारी नभएको दावी गर्नुभएको छ ।